Dowladda Jabuuti oo Sheegtay in Dagaalada Yemen ay Halis ku yihiin Soomaliya – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 4:52 b 0
Axad, May 10, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalka Yemen uu halis dhanka amaanka ah ku yahay wadamada ku yaala geeska Africa gaar ahaan Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle oo ka hadlayay xaaladda wadanka Yemen xilligaan ka jirta ayaa ka digay in haddii uu sii socdo dagaalka Yemen in kooxaha Al-Qacida ku xiran ay awood ku yeelanayaan dalkaasi isla markaana ay dhanka kale halis amaan ku yihiin wadamada ku xeeran ee Soomaaliya ka mid tahay.
Aragti ahaan dawladiisa waxaa uu sheegay inay u aragto dagaalka Yemen mid culays hor leh gobolka ku kordhinaya waxaana uu walwalka ugu badan ka muujiyay awooda Al-Qacidada jaziiradda Carabta iyo saameynta ay Soomaaliya ku yeelan karaan.
“Kooxda AQAP waa ay ka faa’idaysanayaan qalalaasaha jira dabcana awoodooda waa ay gaarsiin karaan Soomaaliya” ayuu yiri M/weyne Geelle oo la hadlay wakaaladda wararka AFP.
M/weynaha Jabuuti waxaa uu dhanka kale codsaday in la taageero dadka Yemeniyiinta ah ee dalkooda ka qaxaya oo tagaya wadamo Yemen ka mid tahay.
Maraykanka ayaa dhawaan sheegay inay hayaan xog ku saabsan in boqolaal dagaalame oo Al-Qacida ka tirsan oo soo galay Soomaaliya kadib markii ay horey u soo raaceen doonyo soo qaaday qaxooti Yemeniyiin.
Soomaaliya ayaa xaduud dhanka badda ah la leh dalka Yemen waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka Yemen Soomaaliya yimid kumanaan ruux oo dalka Yemen kasoo cararay.
Sacuudiga oo lagu Eedeeyay Tacadiyo ka dhan ah Somalida dalkeeda ku Nool